Mpempe akwụkwọ eletriki ike eletrik - China ndị na - akwụ ụgwọ eletrik eletrik eletrik, ,lọ ọrụ
Mpempe ume ọhụrụ na-akwadogo maka otu (kaadị IC) bụ ngwaahịa mmelite ike ọhụrụ nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara ma mepụta dị ka nkọwa ọrụ aka nke GB / T17215.321-2008. Ngwaahịa a na-eji nnukwu sekit agbakwunyere na teknụzụ SMT, ya na ọrụ dị ka tụọ ike eletriki, nhazi data, nyocha oge, yana mmekọrịta ozi.
Otu elekere eletriki elekere eletriki n’otu (ime obodo) bu ihe omumu ohuru nke ike nke ulo oru anyi guzobere ma weputa ya site na uzo oru aka nke GB / T17215.321-2008. Ngwaahịa a na-eji nnukwu sekit agbakwunyere na teknụzụ SMT, ya na ọrụ dị ka tụọ ike eletriki, nhazi data, nyocha oge, yana mmekọrịta ozi.
Otu elele elele elele elele elele anya dị otu (temel + + ala) bụ ihe ọhụrụ na -ele ike ike nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara ma mepụta ya dabere na nkọwapụta nke GB / T17215.321-2008. Ngwaahịa a na-eji nnukwu sekit agbakwunyere na teknụzụ SMT, ya na ọrụ dị ka tụọ ike eletriki, nhazi data, nyocha oge, yana mmekọrịta ozi.
Otu elele elele elele elele elele (Single elekere) otu elekere eletrik bụ ihe ọhụrụ na -ewupụta ike nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara ma mepụta ya dabere na nkọwapụta nke GB / T17215.321-2008. Ngwaahịa a na-eji nnukwu sekit agbakwunyere na teknụzụ SMT, ya na ọrụ dị ka tụọ ike eletriki, nhazi data, nyocha oge, yana mmekọrịta ozi.
Otu elele elele elele elele elele (Single IC) + bụ ihe eji arụ ọrụ ike ọhụrụ nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara wee mepụta ya site na nkọwapụta aka nke GB / T17215.321-2008. Ngwaahịa a na-eji nnukwu sekit agbakwunyere na teknụzụ SMT, ya na ọrụ dị ka tụọ ike eletriki, nhazi data, nyocha oge, yana mmekọrịta ozi.
Mita ume 3phase (kaadị IC) bu ihe nha ike ohuru meputara ma ulo oru anyi meputara dika uzo aka di nke GB / T17215.301-2007, DL / T614-2007 na DL / T645-2007. Ngwaahịa a na-eji nnukwu sekit agbakwunyere na teknụzụ SMT, ya na ọrụ dị ka tụọ ike eletriki, nhazi data, nyocha oge, yana mmekọrịta ozi.